Tọghata oke ala jikọtara ala na ogo, ka UTM ma see na AutoCAD - Geofumadas
Eprel, 2012 AutoCAD-AutoDesk, Cartografia, downloads
Ebuputara ndebiri Excel a ka ị gbanwee nhazi ala na UTM, site na usoro ntụpọ ruo ogo, nkeji na sekọnd. Naanị ihe N'adịghị ka mkpara anyị mere tupu, Dị ka e gosiri na ihe atụ:
The concatenated n'ime a eriri
Atọghata ha na-ahazi UTMNa otu nhọrọ ịhọrọ a Datum
Concatenate iwu ntụpọ iji mepụta isi ihe na AutoCAD na otu Copy / mado
Concatenates na polyline iwu ise polygon na a oyiri / tapawa
Kedu ka esi arụ ọrụ nke ịtụgharị nhazi ala na UTM:
Iji dozie ogige ntinye, a na-etinye akụrụngwa na sel. A na-eme ya na taabụ data, na nhọrọ nkwado data. Anyị họọrọ na ọ bụ naanị na-akwado data ọnụọgụ dị n'etiti -180 na 180, nke kachasị kachasị na-akwado ogologo. Ma ozi ezighi ezi na-egosi na anaghị anabata data ahụ. Banyere latitude, egosiri ya n’etiti -90 na 90.
Ịhọrọ Ụwa na ogologo, nke bụ na kọlụm G, na cell ọnọdụ, na ọ bụrụ na-ahazi na-adịghị mma na-W ederede e dere, ma ọ bụrụ na nti ederede etinye E.
A na-eme nke a na usoro ahụ = Ọ B IFR ((G37 <0, »W», »E»)
N'otu aka ahụ na latitudes na na-na H kọlụm, ma ọ bụrụ na-ahazi na-adịghị mma akwụkwọ ozi S e dere, ma ọ bụrụ na nti N.
Usoro ga-abụ = Ọ B IFR ((H37 <0, »N», »S»)
Iji wepu akara ule, ndị zuru uru a na-eji na ọnụ ọgụgụ na-truncated na efu ntụpọ = ABS (TRUNC (G37,0)) otú a -87.452140 ga-aghọ 87
Iji wepụ nkeji, a na-ewepụta uru mbụ site na uru truncated, nke mere na naanị decimals fọdụrụ (0.452140) na uru ahụ na-amụba site na 60, nke bụ ngụkọta nke nkeji na ogo. A na-egbutu ya na ebe ntụpọ efu ma si otú a nweta ya na na 0.452140 enwere nkeji iri abụọ na asaa = TRUNC ((ABS (G37) -J37) * 60,0)
Iji nweta sekọnd, a na-amụgharị decimals (0.452140) site na 3600, nke bụ ọnụọgụ nke sekọnd na ogo (60 × 60), anyị wepụrụ ihe anyị wepụrụ na mbụ, nke bụ nkeji (27) mụbara ugboro 60. Mgbe ahụ, a na-etinye gburugburu, ya na cell ntụaka ebe ọnụ ọgụgụ ntụpọ dị ka enwere ike idozi ya. Yabụ, enwere sekọnd 7.704. =REDONDEAR((((ABS(G37)-J37))*3600)-(K37*60),$L$5)
Iji mee ka iwu ahụ dokwuo anya, a na-eji eriri akara ahụ eme ihe, nke mere na ọ bụ naanị mkpụrụedemede ka e depụtaghachiri na akara akara AutoCAD = CONCATENATE («_ point«, ROUND (S37,2), »,», ROUND (T37,2)). N'otu aka ahụ, iwu polyline = CONCATENATE («_ pline«, ROUND (S37,2), »,», ROUN (T37,2)). Ịchịkọta emetụta bụghị kwa ogologo ígwè na-mere.
Na template bụ ụfọdụ Atụmatụ ịrụ a ikpeazụ ihe.
Site ebe a ị nwere ike ibudata template, na-akwụ ụgwọ Kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ Paypal.
Previous Post«Previous Ulo oru ohuru Bentley Descartes v8i
Next Post 3 WordPress plugins uru ịkwụsị naNext »
16 Na-aza "Tụgharịa nhazi njikwa ntụpọ ntụpọ rue ogo, na UTM ma see na AutoCAD"
gwa m, ihe na-eme dị iche.
Ọ bụrụ na ị zụrụ template ahụ, rịọ nkwado site na ozi ahụ ị nwetara njikọ njikọ
Denis kwuru, sị:
Ịhụ ntughari na UTM ezighị ezi, ụkpụrụ anaghị ezite, biko nyere aka ma ọ bụrụ na m na-eme ihe na-ezighị ezi
December, 2014 na
Enwere m ekele na nkwupụta gị mana ị ghọtaghị. Isiokwu ahụ kọwara nke ọma otu ị ga - esi mee ya onwe gị, dịka m mere.
Lelee email, tinyere spam. Ọ bụrụ na ịnwe nsogbu karịa, kpọtụrụ anyị na email na-egosi na nnata gị.
Fernanda kwuru, sị:
Nwere ike ị nyere m aka biko, m na-azụta na m kaadị na m nwere ike ọ gaghị enyere ibudata template site Pleeeease
Ee, ị Agbaghara ya.
All template bụ free mbụ izu abụọ mgbe n'akwụkwọ, mgbe ahụ, download na ebubo.
Ọ dị njọ na ha na-ere ndebiri, amaara m ihe ọ ga-efu iji mee ha mana ọ dị mma na anyị ga-eme, ndị enyi nke oghere Geofumadas bụ ọkara ike hahaha. 🙂
Ebe m nwere ike ibudata; ndebiri na ihe ndị ọzọ o doro anya na ike (doro anya ugwo via Paypal) ekele
Roberto CORNEJO kwuru, sị:
Magburu onwe! Daalụ maka na-ekere òkè na ihe ọmụma.
Ekele si MEXICO.
jose Medina manznao kwuru, sị:
excelente¡¡¡LA Nkwurịta Okwu AS AN ebe nke ihe ọmụma
Ike, 2012 na
A nnọọ uru ngwá ọrụ, kama ọ na-eje ozi m, enyi ekele, ekele ala nke Guanajuato, Mexico
Silvina kwuru, sị:
Ngwá ọrụ magburu onwe m na-eche SIRVIO
Gerardo kwuru, sị:
Ezigbo mma ndị ọrụ ex .ọrụ magburu onwe ya !! Cheers